mubvunzo 737 MAX
1 gore 3 ago #742 by jimidget
Boeing akangobuda ne 737-MAX iyo inoshandisa injini imwechete seyo 787 iyo inowedzera mari yekumhanya, saka kupa ndege ndege yakareba. Apo pangave pane zvimwe zvinhu pairi zvandisingazivi nezvazvo. Pane mimwe mikana yokuti mune ramangwana tinogona kuona izvi mukudhinda?
1 gore 3 ago #743 by Jamesman8
Pane zvinhu zvakawanda zvakakanganisika nemashoko aya. Chokutanga, 737MAX yave yakapoteredza kwegore nehafu, uye yave ichibhururuka zvekutengesa kubvira May 2017 (Malindo Air). Chechipiri chezvose, HARARE. I737MAX uye 787 vanoshandisa injini imwechete? Uri munhu akakwirira here? Iyo injini inoshandiswa pa 787 inenge yakaenzana neyayo yose 737 fuselage. Iyo 787 inoshandisa GE GEnx uye Rolls Royce Trent 1000, panguva iyo iyo 737 inoshandisa CFM LEAP-1B. Hakuchina shanduro dzakanaka dzendiza iyi yeFSX / P3D kunze kweTDS panze. PMDG haina kusunungura shoko pamusoro peizvi sechinhu chinogona.
Zvinotevera mushandisi (s) akati Thank You: Whitten
1 gore 3 ago #744 by jimidget
Wow. Jamesman8 ine dambudziko rekuona. Ndinogona kunge ndisingazviiti nguva dzose, asi, nguva ino ndauya pedyo. Heuno mawebhusayithi eBoing tech specs pane MAX series ye737's. Zvichida mumwe munhu anokosha anogona kupindura mubvunzo uyu:
1 gore 3 ago #745 by Jamesman8
Nokutaura iwe hauna kuuya kune pedyo pedyo, vanoshandisa injini dzakasiyana zvakasiyana, uye ndakapindura mubvunzo wako. TDS 737 MAX inowanika pane ino webhusaiti. Go download it.
1 gore 3 ago #746 by Gh0stRider203
Ndiri kupa zvall TWO zvisarudzo. 1) pamwe chete uye muve zvakanaka kune mumwe; Kana 2) Ndinosunga tambo iyi. Hakuchina 3rd sarudzo.
1 gore 3 ago #749 by Jamesman8
Iwe unogona kuzvivhara, ndakapindura mubvunzo wake. Handisi kunyengera ini ndiri kungotaura zvinhu zvakachena.
1 gore 3 ago #751 by Dariussssss
Nemhaka yokuti iyi yose hurukuro yakandiita kuseka sezvisina kumboitika kare, handingasiyi ..... lol
1 gore 3 ago #764 by superskullmaster
Zvichida ndoga asi ini ndinonzwa sokunge kana mumwe munhu akanaka kwazvo achikumbira, iwe unofanira kuzvipa ivo. Isu tose tine internet neGoogle, ini handioni chero chinhu chisina kunaka nenzira iyo yakatanga kugadziriswa. Wakanga akanaka chaizvo asi.
1 gore 2 ago #778 by Gh0stRider203
Yakarongedzwa kuitira kuti ishumire somuenzaniso weZVII zvisingamboiti paunenge uita chimiro (uye sei (~ kukanganwa ~ "kwete") kupindura pamashoko akadaro).
1 gore 2 ago #781 by julian1245
Guys izvo jimidget iri kuedza kutaura kuti kinda akashandura injini yacho kubva ku 787 uye akaiisa pa 737 max asi james ari chairo iyo injini ye 2 yakasiyana asi inowana chii jimidget iri kuedza kutaura kuti inenge yakaita sejini imwechete ini anobvumirana.
uyewo fadza kwete vanhu vane mchere nokuti ndinoziva kuti vari pawebsite ino
Time chokusika peji: 0.151 mumasekonzi